Masindahy Polycarpe de Smyrne
23 febroary — I Polycarpe dia eveka tao Smyrne nandritra ny taona maro ary maty martiry. Niaina teo anelanelan'ny taona 80 hatramin'ny taona 167 izy. Ny tantarany no tranainy indrindra aorian'ny tantaran'i Masindahy Étienne raha ireo martiry no resahana ary ny fety fahatsiarovana azy no vaninandro nankalazaina voalohany fahiny.
Nolazaina fa nahalala an'i Masindahy Joany Evanjelista i Polycarpe ka io no nanendry azy ho evekan'i Smyrne. Nandritra ny naha evaka azy dia niezaka izy tamin'ny fampifandraisana ny Eglizy Tatsinanana sy ny Tandrefana. Nanana ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra izy ka tsy voahozongozona na dia niaina tao anatin'ny fanenjehana aza. Nasehony tamin'ny mpanaraka hevi-diso ny finoany ary nalemy fanahy izy indrindra ho an'ireo mpananontena sy ireo andevo, tsy mba nanavakavaka i Polycarpe. I Masindahy Irénée no mpianany ka nitantara izay zavatra niainany.
Nandritra ny fanenjehana nataon'i Marc Aurèle no nisamborana an'i Polycarpe, 86 taona izy tamin'izay. Fantany fa hisambotra azy ny mpanenjika ka niafina tao amin'ny tanimboly iray izy, nisy nanoro anefa ny toerana nihereny ka tonga tao ny miaramila haka azy. Vao nahita izany ireo vahoaka mpanompo sampy dia nihorakorakoraka ny mba hamonoana azy, tamin'izay indrindra no nanerena an'i Polycarpe handà ny finoana an'i Kristy fa hoy izy: "86 taona no nanompoako an'i Kristy ary nanao soa ahy hatrany Izy ka inona no antony handavako ny Mpamonjiko sy ny Mpanjakako ankehitriny? Krisitianina aho, ka raha te hahafantatra ny fiekem-pinoako dia mifidiana andro iray hihaonana amiko sy hihainoana ahy". Dia nohelohina ho dorana velona izy ary mbola nivavaka izy talohan'ny namonoana azy ho martiry.